Nkọwa ihe omimi Otu esi esi mepụta Ndepụta nke atọ na-emepụta okporo ụzọ na E-Trade
N'ọnọdụ ọ bụla, ịzụ ahịa okporo ụzọ bụ otu n'ime ụzọ isi ruo ebe dị elu. Mgbe olearụ ọrụ njikwa Search Engine (SEO), mkpado na nkọwa ndị dị na ya bụ akụkụ ndị dị mkpa iji dozie okwu ndị na-asọmpi. E-ahia metankọwa bụ mgbasa ozi dị mkpirikpi.
HTML meta mkpado nyere ihe nkesa ozi bara uru gbasara ibe weebụ - fine watches replica. E nwere mgbe niilemkpado meta maka nkọwa nke ọdịnaya peeji nke, akara meta maka ozi nwebisiinka na mkpado meta jide robots.txt. Dị ka ihe atụ,
Nkọwapụta nkọwa meta dị mkpa karịsịa na mgbasa ozi mgbasa ozi.Ọ na-enye mkpali maka ịbụisi na mkpa mgbe ndị na-ekere òkè na saịtị na-enweta ọtụtụ ugboro. Ya mere, SMM bụ usoro bụ isi nke ịbatandị ahịa. Ọ na-enyere mmalite mmalite aka iti ndị asọmpi aka ma nye onye ọ bụla ohere iji chịkwaa niche ha.
Nik Chaykovskiy, onye njikwa nke ndị ahịa nke Ụlọ elu akọwa isi ihe ndị ị ga-atụle mgbe ị na-akọwapụta nkọwa atọ.
Mgbe iji Jiri Ihe Meta
Maka otu isiokwu nke isiokwu, nkọwa meta nwere ike ịba uru na imeụfọdụ mgbanwe. Meta nkọwa na-enye ndị na-ekiri nkwenye ọzọ nkwenye banyere uru nke ọdịnaya gị maka isiokwu nke isiokwu.Nchọgharị ọchụchọ, nke yiri nke ahụ chọrọ nkọwa nhazi iji mebie eriri.
Akwadoro na nkwonkwo na-etinye aka na ọdụ ọdụ ogologo maka meta nkọwa. Ọ bụrụ na ọdịnayagụnyere ihe karịrị mkpụrụokwu atọ, anaghị eji ha na nkọwa meta..Nchọgharị nyocha nwere ike ịmehie n'ụzọ dị mfe n'ihinri nri nri, nke, n'aka nke ya, na-eburu gị ọkọlọtọ. Ị ga-ewere otu akụkụ nke ibe ahụ ma jiri snippet mee ka ọ pụta naozi ọchụchọ ọchụchọ.
Ịdepụta Ezigbo E-ahia Meta Description
Maka ọtụtụ ngwa, ogologo kachasị mma maka nkọwa meta bụ ihe karịrị 160 ederede.Dị ka ọmụmaatụ, Google dị ka ụlọ ọrụ nwere ebe nrụọrụ weebụ nwere nkọwa meta, nke nwere mkpụrụedemede 159. Nke a na-agụnye ọbụna oghere dị ka ihe odide.
Mgbe ị na-ede nkọwa dị mma, ọ dị mkpa ịtụle ya dị ka tweet ma ọ bụa Facebook. Twitter nwere oke nke mkpụrụedemede 160. I nwekwara ike ịgbaso ụfọdụ ntụziaka ndị a:
Jiri isiokwu. Chọta nkebi okwu na-enye ọdịnaya ahụ, nke dị elu na ihe nkeonye ọrụ na-achọ. Ọ bụ ihe dị mkpa nke metụtara ụfọdụ n'ime ihe ndị na-eme ka algorithm na-ebuli gị elu.
Jiri verbs. Verbs kpaliri mmadụ ime ihe ozugbo. Ị nwere ike ijiahịrịokwu dị ka "Ntanetị ntị na Jumia."
Jiri oku na-eme ihe. Jikọta nkọwa meta na omume dịka "ịzụ ahịa", "budata" ma ọ bụ "ịzụta".
Mee ndebiri. O siri ike ide ederede ihe omimi nke obulapeeji nke. Site na iji ndebiri, ị nwere ike ime ka ọ dị mfe.
Meth descriptions enyere gị na ebe nrụọrụ weebụ na-elu elu site na-apụtaghị. Ọtụtụndị mmadụ aghọtaghị na ịnweta ọkwá dị elu apụtachaghị igodo. Meta nkọwa kọwara onye na-elele ibepịa ya. O nwere ozi bara uru nke nwere ezi uche na nyocha ọchụchọ maka isiokwu nke enyere. Ha nwekwara ihe ọzọihe dị oke mkpa, kọwaa nkọwa nkọwa. Meta mkpado dị mkpụmkpụ iji gosipụta ihe mgbasaozi mgbasa ozi. Mgbasa ozi mgbasa ozi bụ otu n'imeụzọ backlinks na mkpa nwere ike ime ka SEO nyekwuo gị ndị ọbịa.